Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! खत्रीको लोकदोहोरी गीत ‘बर्खामास’सार्वजनिक
खत्रीको लोकदोहोरी गीत ‘बर्खामास’सार्वजनिक
काठमाडौं । असार लागेसँगै लोकगायक विष्णु खत्रीको लोकदोहोरी गीत ‘बर्खामास’ सार्वजनिक भएको छ । खत्रीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट बुधबार बिहान सार्वजनिक गरिएको सो गीतलाई एक दिनमै ९२ हजार बढी पटक हेरिएको छ ।
गीतमा गायक खत्री र गायिका शान्तिश्री परियारको स्वर छ । शब्द र सङ्गीत पनि गायक खत्रीले नै दिनुभएको छ । कजिस श्रेष्ठको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा कलाकार तुलवीर थापा र पूजन घिमिरेको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
गीतको भिडियो छाँयाकन जिल्लाको गलकोट, हरिचौरमा गरिएको गायक खत्रीले बताउनुभयो । गलकोट उहाँको जन्मथलो पनि हो । भिडियोमा बढीजसो रोपाइँको दृश्य समेटिएको छ । वर्षायाममा हुने खेतीपाती, मेलापात र अर्मपर्मको संस्कृतिलाई गीतको श्रव्य÷दृश्यमा चित्रण गरिएको छ ।
“बर्खामास गाउँघरमा हुने गतिविधिलाई गीतमा उतार्ने प्रयास गरेका छौँ, भिडियोमा पनि मौलिकता झल्किएको छ”, गायक खत्रीले भन्नुभयो ।
दुई दशकदेखि नेपाली लोकसङ्गीतमा क्रियाशील खत्रीले हालसम्म सयौँ गीतमा स्वर, शब्द र सङ्गीत दिनुभएको छ । मौलिक गीतसङ्गीतको रचना र गायनमा पोख्त खत्रीका ‘भरिया दाइ’, ‘कि सास चाहियो, कि लास चाहियो’, ‘जम्मु कश्मिरमा’, ‘सरकार ! के गरेर खाम’लगायतका गीत चर्चित छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २, २०७९, ०९:४८:००
सोमबार, जेठ ३०, २०७९ गायक राजु लामालाई तामाङ समाज अमेरिकाको सम्मान
मंगलबार, जेठ २४, २०७९ लोकगायक गुरुङलाई १ लाखसहित ‘संगीत तथा नाट्य राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार’ प्रदान
बिहीबार, जेठ १९, २०७९ पल शाहको मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा बहस सकियो
बुधबार, वैशाख २१, २०७९ पञ्चकन्यामा तेजबहादुरलाई जिताउन माओवादीको चुनावी गीत [अडियो]
शनिबार, वैशाख १७, २०७९ ‘बिट्वीन लाइन्स एन्ड लेयर्स’ कलाचित्र प्रदर्शनी
शनिबार, वैशाख १७, २०७९ गोकर्णमा मध्यरातमा सुरु भयो मानदेवकालीन कान्तिभैरव जात्रा